﻿	လွယ်ကူသောအိမ်လုပ်စတော်ဘယ်ရီသံပုရာ - ချက်ပြုတ်နည်းများ
လွယ်ကူသောအိမ်လုပ်စတော်ဘယ်ရီ Lemonade! ဤသည်လတ်ဆတ်သောမှည့်သောစတော်ဘယ်ရီနှင့် zesty tart သံပုရာနှင့်အတူတင်ဆောင်အများဆုံးအံ့သြဖွယ်နွေရာသီသောက်စရာ။ မိသားစုတစ်စုလုံးသည်နွေရာသီအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောဤလန်းဆန်းစေသောအချိုရည်ကိုနှစ်သက်ကြလိမ့်မည်။ ဗော့ဒ်ကာတစ်မျိုးထပ်ဖြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကော့တေးတစ်ခုထဲသို့ပြုလုပ်ပါ။
နွေရာသီမှည့်သောစတော်ဘယ်ရီနှင့်ရေခဲသောအရသာကဲ့သို့နွေရာသီတွင်ဘာမျှမပြောနိုင်ပါ လင်မနစ်ဖန်ခွက် ။ ဤလတ်ဆတ်သောစတော်ဘယ်ရီလင်မနိတ်စာသည်ရိုးရှင်းသောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူအကောင်းဆုံးနွေရာသီသောက်စရာဖြစ်သည်!
သစ်သီးဖျော်ရည်တစ်မျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကြီးစွာသောအရာမှာသင်အမှန်တကယ်ထိုအသီး၌မည်သည့်အသီးကိုမဆိုသုံးနိုင်သည်။ ဒီဟာကိုကော့တေးတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဗော့ဒ်ကာတစ်ထပ်ထည့်ပြီးရေအချို့ကိုစပျစ်ဝိုင်နဲ့အစားထိုးလိုက်ပါ။
ငါမသုတ်သင်မီသကြား / အသီးအရောအနှောကိုပြုတ်ခဲ့ပေမယ့်အများကြီးပိုအချိန်ယူတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဤနည်းလမ်းသည်မြန်ဆန်လွယ်ကူပြီးအပိုအရသာရှိပါသည်။
အရသာပိုရရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သံပုရာသကြားကိုဖန်တီးရန်နှင့်ဖန်ခွက်ကိုအနားပေးရန်ပင်အသုံးပြုသည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အခွံသို့မဟုတ် zester ကို အသုံးပြု၍ အဝါရောင် zest ကို ၁-၂ လီမွန်သံပုရာများမှအခွံချပါ။ ၎င်းအောက်ရှိခါးသောအဖြူရောင်အရွက်ကိုမရရန်သေချာစေသည်။ zest peelings များကိုသခွက် ၁ ခွက်တစ်ခွက်တွင်ထည့်ပြီးအနံ့အရသာအနည်းဆုံးမိနစ် ၃၀ ခန့်ထားပါ။ ဒီသကြားဟာစာရွက်ထဲမှာအရသာရှိတယ်၊ လတ်ဆတ်တဲ့လက်ဖက်ရည်သို့မဟုတ်ရေခဲလက်ဖက်ရည်ထဲသို့ရောထွေးသည်သို့မဟုတ်အချိုပွဲတွင်ဖျန်းသည်။
ပြင်ဆင်ချိန်၁၀ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်0 မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၁၀ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၈ ခွက် စာရေးသူHolly Nilssonလွယ်ကူသောအိမ်လုပ်စတော်ဘယ်ရီ Lemonade! ဤသည်လတ်ဆတ်သောမှည့်သောစတော်ဘယ်ရီနှင့် zesty tart သံပုရာနှင့်အတူတင်ဆောင်အများဆုံးအံ့သြဖွယ်နွေရာသီသောက်စရာ။ မိသားစုတစ်စုလုံးသည်နွေရာသီအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောဤလန်းဆန်းစေသောအချိုရည်ကိုနှစ်သက်ကြလိမ့်မည်။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢4 ½ ခွက် လတ်ဆတ်သောစတော်ဘယ်ရီ ထက်ဝက်
▢½ ခွက် သကြား သို့မဟုတ်အရသာအတွက်
စတော်ဘယ်ရီနှင့် 1 ခွက်ကိုရေရောစပ်ပြီးထည့်ပါ။ ချောမွေ့ပြီး strainer များကို သုံး၍ ချောမွေ့သည်အထိရောနှောပါ။ (သင်ဖျော်ရည်တစ်ခွက်လောက်ရသင့်တယ်) Lemon ကိုဖျော်ရည်။
2- quart အိုးထဲမှာစတော်ဘယ်ရီဖျော်ရည်, သံပုရာဖျော်ရည်နှင့်သကြားရောနှော၏အကြောင်းကိုထည့်ပါ။ အိုးတစ်ဝက်ကိုရေခဲနှင့်ဖြည့်ပါ။ ရေအေး 4-5 ခွက်ထည့်ပြီးနှိုးဆော်။
သော့ချက်စာလုံးစတော်ဘယ်ရီလင်မနိတ် သင်တန်းအချိုရည် ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။